हिन्दू धर्ममा किन शवलाई जलाइन्छ ? ~ Khabardari.com
हिन्दू धर्ममा किन शवलाई जलाइन्छ ?
7:16 PM admin No comments
पाच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश रहेका छन् । धर्म शास्त्रका अनुसार मृत व्यक्तिको शरीरलाई जलाएपछि शरीर यी पाँच तत्वमा विलीन हुन जान्छ । र, आत्मालाई मुक्ति मिल्छ । Some Video Clips regarding Cremate of Hindus: